Dalal badan oo ku heshiiyey in la badbaadiyo kaymaha Caanka ah ee…. | Koonfur Galbeed News
HomeArimaha DibadaDalal badan oo ku heshiiyey in la badbaadiyo kaymaha Caanka ah ee….
Dalal badan oo ku heshiiyey in la badbaadiyo kaymaha Caanka ah ee….
7th September 2019 Arimaha Dibada, Wararka Maanta 0
Toddobo dal oo ku yaal Latin America ayaa wada saxeexday heshiis wax lagaga qabanayo masiibooyinka dabiiciga ah ee ku habsada kaymaha Amazon ee dunida ugu ballaadhan.
Xukun lagu riday Askari Muqdisho ku dilay saddex qof oo walaalo ah
Qabanqaabada soo dhaweynta RW Kheyre oo socota Baydhabo (Daawo Sawirro)